‘World Raid’ | GAZETY_ADALADALA
Filed under: anao ny fitenenana, fiaraha-monina, politika, tapatapany | Tagged: Fetison, governemanta, Raid, Rajoelina |
« Fomba hiarovana ny tena amin’ny gripa AH1N1 ANTSO AVO ho an’ny mpiandraikitra ny Commune Urbaine Antananarivo »
Hery, on 22/11/2009 at 5:37 said:
mba mirediredy koa ito article ito. Inona no mbola nandehana nifanarahana tany Maputo sy Addis Abeba raha nahavita irery an’io, izao mbola be vava ihany. Aza omena toerana i Fetison raha mafy be dia ho hita eo raha ho tafavoaka. Efa sivy volana izay tsy nety nahazo reconnaissance internationale koa be vava eo ihany. Natao daholo ny vava rehetra nanomboka t@ hoe ratsy sy devoly Ravalo kanefa naninona no mbola nifanaraka taminy ihany rehefa tapi-dala-kaleha. Raha nahavita irery an’io naninona no tsy natao.
Ahoana tsara moa hoy i Ramaroson: na any Genève na tsy misy, ary tsy izay tian’i Ravalo foana akory no atao. Nefa inona koa fa maika ery nakany Addis Abeba. Raha be vava ohatra izany naninona raha nijanona fa tsy nisisika ny ho any Addis Abeba.
Lazaina fa mahavita tena ary tsy mila ny bailleur de fonds nefa nony efa nanomboka tsy tafavoaka milelaka ny v…ny ihany.
Aiza daholo moa izao ireny fampanantena natao teny @ 13 mai ireny. Vary morabe, menaka morabe, sns… hanjaka ny demokrasia kanefa vao navoakan’ny Reporter sans frontière dia classement de la liberté de presse lasa 134ème nefa t@ andron’i Ravalo 94ème. Fihemorana ve izany sa fandrosoana, anjaran’ny mpanoratra ny article no mitsara azy.
Ny rehetra izao efa sahirana @ vidim-piainana miakatra andro aman’alina fa ny Putschiste tsy mety mahatsapa an’izany, mbola laozana mamafy lainga foana.
Tsisy zavatra nihatsara mihintsy hatrizay nahatongavanareo putschiste teo @ fitondrana, ny efa nitsangana aza noravanareo. Jereo firy izao no chômeurs, mihamitombo ny mahantra sns…
Efa tsy eo Ravalo koa maninona no tsy atsaraina daholo ireny nokritikenareo taloha ireny. Sa moa izao no tena tanjona t@ ilay tolona, dia tsy inona izany fa ny hampahantra ny vahoaka Malagasy.
gazetyavylavitra, on 23/11/2009 at 6:54 said:
Valin-teny ho an’i Hery : angamba raha mandinika tsara an’io lahatsoratra io ianao dia samy mahazo ny anjarany ao daholo na ny olona andrianinao, na izay halanao mainty. Koa mba mahaiza mamaky sy mijery tsara. Raha miteny aho hoe AZA MANADINO ANAY IANAREO ANY AMBONY ANY, dia tokony ho fantatrao raha manaraka ny raharaham-pirenena ianao, fa TELO LAHY MISAINA BE no ao ambony ao. Raha miteny aho hoe ‘Hendry vahoaka ianareo‘, tokony ho fantatrao fa ny ‘ianareo’ lazaiko eto dia ireo izay mihevitra ny tenany ho FILOHA amin’izao TETEZAMITA IRAISANA izao, ary raha miteny aho fa ‘Sambatra ihany ianareo ao ambony ao zalahy ka! Afaka mitsangatsangana amin’ny volabe-nareo. Afaka manao fandaniana miohoam-pampana (raha tena marina fa handeha hivoaka isaky ny misy manahirana).’ dia tokony ho fantatrao koa fa mbola ireo mpitondra ao ambony ao ireo no tondroina amin’io, na izy handeha jet privé,na hiantohan’ny GIC sns… Koa mahaiza mamaky sy mandalina fa aza tonga dia manao ilay hoe rehefa halako dia tsy misy dikany, ary rehefa tiako dia laniko hatramin’ny malotony.
Jereo fa na ny GIC izay nodradradradrain’ny andaniny fahiny , ary avy eo nolelafin’ny ankilany indray, ry zareo aza niteny fa tsy misy ilàna ny mandeha any an-dafy izany fa tokony ho efa raharahan’ny samy Malagasy ny famahana an’io, ary inona hoy izy no tsy anaovana VisoConférence raha fihaonana sy resaka mivantana no ilaina. Raha tsy hoe angaha ka ilaina mihitsy ny mifampikasi-tanana eo amin’izy efa-dahy vao vita ny resaka. Raha izay dia ilaina ny hihaonana vatana, fa raha tsy izay dia ataoko fa efa mba misy ny teknolojia avo lenta ahafahana manao io lazain’ny GIC io daholo ny firenena maro, ka na eo ambony fandriana aza ingahy ANDRY, any amin’ny piscine ingahy RAVALO, any amin’ny hotely FETISON, any amin’ny Villa ELISABETH i RAKOTOVAHINY, tsy hitako izay tsy anaovana an’izay. Sa sanatria ve hisy hanao fanahin-jaza ka hoe rehefa tsy te-hiresaka dia, toy ny telefaonina, tapahana dia vita, sady arahana teny anakampo hoe: ‘f’angaha elaisany mahita na afaka mankaty amiko?’ Asa re ry zareo, fa dia miandry izay te-hahita e! Isany aho…